Camaliyad Istish-haadi Ah Oo lagu Dilay Askar American Ah. – Bogga Calamada.com
Camaliyad Istish-haadi Ah Oo lagu Dilay Askar American Ah.
Camaliyad Istish-haadi ah oo qeyb ka ah Xamlo dagaaleedka Al-mansuuriyah oo afar maalin ka hor ay ku dhawaaqday Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Nasaarada Mareykanka.
Kolanyada Amerikanka ah ee lagu weeraray Camaliyadda Istish-haadiyada ah ayaa ku socdaalayay duleedka degmada Bati Kot oo ka tirsan gobalka Nangahaar oo dhaca Bariga dalka Afghanistan.
Bayaan rasmi ah oo kasoo baxay Imaarada Islaamiga Afghanistan kuna saxiixanyahay afhayeenka Imaarada Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid laguna baahiyay Webseydka Imaarada ee http://alemara1.net ayeey Imaaradu ku sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi.
Bayaanka ayaa lagu xusay in Camaliyadda lagu dilay Lix Askari oo American ah tiro intaa ka badane lagu dhaawacay’sidoo kale camaliyadda waxey burburisay tiro gaadiid ah oo ay wateen ciidamada gaalada Mareykanka.
Camaliyaddan waxaa fuliyay Mujaahid ka tisan Katiibada Istish-haadiyiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan kaasi oo lagu magacaabi jiray Saciid kana mid ahaa ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka Afghanistan.
Camaliyaddan Istish-haadiyada ah ayaa noqoneysa midii ugu horeysay oo lala beegsada Nasarada Mareykanka tan iyo markii dhawaan dalka Afghanistan ay si toos ah kaga bilaabatay Xamlo dagaaleedka xilliga Gu’ga ee Al-mansuuriyah.
Halkan Ka Akhriso Bayaanka Imaarada.